Rwanda: Haweenka Uurka leh Oo Barnaamijkajimicsi ah loo bilaabay | Sooyaal Radio
Soyaal Radio Warar Rwanda: Haweenka Uurka leh Oo Barnaamijkajimicsi ah loo bilaabay
Rwanda: Haweenka Uurka leh Oo Barnaamijkajimicsi ah loo bilaabay
Ahmed Ali · Oct 24th, 2019 · Comments Off on Rwanda: Haweenka Uurka leh Oo Barnaamijkajimicsi ah loo bilaabay
Dawladda dalka Rwanada ayaa markii ugu horeysay bilowdaya jimicsi si shaacsan ay kaga qeyb galayeen, Kaqeyb galayaasha jimicsi guud ee ugu horreeyay ee haweenka uurka leh sameeyeen ayaa waxay BBC-da u sheegeen inay ku raaxeysteen oo ay rabaan in mas’uuliyiinta ay sii wadaan barnaamijka.
In kabadan 100 haween ah ayaa ka soo qeyb galay jimicsi guud oo ah kii koowaad ee ka dhaca caasimada dalka Rwanda ee Kigali, usbuuca dhamaadkiisa waxa qaban qaabiyeyaasha ay sheegeen in looga golleeyahay “in lagu baddalo khuraafaadka ku saabsan jir dhiska haweenka uurka leh.”
Nelson Mukasa, oo ah hogaamiyaha ururka aan dawli ahayn oo maxalliga ah oo bilaabay kulanka, ayaa sheegay in dad badan oo reer Rwanda ah ay rumeysan yihiin in markii ay haweeney uur yeelato ay tahay inay joojiso dadaal kasta oo jireed.
“Dadku waa inay ogaadaan in firfircoonaanta ay aad khatar ugu tahay jirkeeda iyo cunugga ay sido,” ayuu yidhi Mr Mukasa.
Wax yar kadib Markuu soo idlaaday Barnaamijka Jimicsiga ayaa, Libérée Uwizeyimana – oo ah Haweenay siddeed bilood uur leh – ayaa waxay BBC u sheegtay in aysan waligeed jimicsan intii ay uurka lahayd.
“Aad ayaan u daalanahay sababta oo ah anigu uma baranin tan, laakiin waxaan sidoo kale ku faraxsanahay inaan la shaqeeyo dumarka kale ee uurka leh,” ayay tidhi.
Ruth Ntukabumwe, oo toddoba bilood leh uur leh, ayaa iyaduna sheegtay inay rabto inay ka soo qeyb gasho fadhiyo badan.
“Waa wax aad u wanaagsan, waxaan ku tababbaray, waxaan dareemay deganaansho kadibna dhaqdhaqaaqa cunugga wuxuu iga dhigay inaan aad u fiicnaado,” ayay tidhi Ruth.
Dr Jean Nyirinkwaya, oo ah dhakhtar ku takhasustay cudurrada dumarka oo ku nool caasimada Kigali, wuxuu ku talinayaa dhammaan haweenka uurka leh ee soo booqda xaruntiisa caafimaad si khaas ah inay sameeyaan jimicsi isboortis.
“Socodka, dabaasha iyo fidinta jirka wax saameyn xun ah kuma yeelan iyaga,” Dr Nyirinkwaya ayaa yidhi.
Qabanqaabiyaha munaasabadda ayaa sheegay inay doorteen layliyo aan saameyn xun ku yeelan doonin haweenka uurka leh. Wuxuu kaloo ku casuumay ragga inay xaasaskooda raacaan inta lagu gudajiro kalfadhiga.